Plateaus နှင့် ပတ်သတ်သောရှာဖွေမှုရလဒ်ZEKKEI Japan(1/7)
Japan has some wonderful highland destinations. Stretching to the horizon inafield of green, some are even grazed by cattle and horses. Cooler for their higher altitudes, Japanese highlands are popular destinations to escape the summer heat. Wouldn’t it be lovely to put togetherapicnic lunch to enjoy at one of these spacious locales?
ပျမ်းမျှ၃.၅ ရှိသော ကြီးမားကျယ်ပြန့် သော ရှု့ ခင်းလှပသောတောင်ကုန်း တစ်ခွင်တစ်ပြင်တွင် အပင်ပေါင်းလေးဆယ့်ငါးသိန်းခန့် ရှိသော ပန်းအပြင် တစ်ခြ...
နွေရာသီတွင် တကယ့်ကို ခရမ်းရောင်အခင်းကြီးကဲ့သို ဖြစ်နေသော လာဗန်ဒါသည် ကျယ်ပြန်နေပြီး ဖူဂျီတောင်နှင့်လိုက်ဖက်နေသော ရှု့ခင်းကို ခံစားနိုင်သော...
မီးခိုးထွက်နေတဲ့ အာဆိုတောင်ရဲ့ အတွင်းတောင်ထိပ်ကို မြင်ရပြီး ပြီးပြည့်စုံတဲ့တည်နေရာဖြစ်တဲ့ ခုစဆမ်ရိ ဖြစ်တယ်။ အချင်းဧရယာ ၁ ကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန...
အကျယ် ၃.၁ မီတာ၊ အမြင့် ၃၆.၆မီတာရှိတဲ့ သစ်သားကြိုးတံတားဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ်တရဓါတ်ပုံရိုက်ရာနေရာအဖြစ် လူကြိုက်များပါတယ်။ တံတားအောက်ကို စီးဆင်း...
ရှိရာနဲတောင်နှင့် ယော်ကိုတဲတောင်ကြားကို ဖြတ်သန်းသွားသော တောင်ကုန်းဆင်း။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှ ၂၁၇၂မီတာရှိသောတောင်ကြားသည် ဂွန်းမခရိုင်တွင်...
မိချခိုင်အိခဲသည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရာသီလေးခုတိုင်းတွင် ရှု့ ခင်းများက မှန်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေသော မည့်သည့်အချိန်လာရောက်လည်ပတ်သည်ဖြစ်စေ လျှိုဝှက်နက...
MacBook Proရဲ့ မျက်နှာပြင်ပုံအဖြစ် အသုံးပြုထားတဲ့ ကမ္ဘာ့ကျော်တဲ့ ရှုခင်းဖြစ်တယ်။ အမှန်က တိုခချိဒါခဲမီးတောင်ပေါက်ကွဲပြီးနောက် ဆောက်လုပ်နေတဲ...
ပတ်ပတ်လည်ကို ၂၀၀၀ မီတာ ရှိတဲ့ တောင်တွေ ဝန်းရံထားတဲ့ အမြင့် ၁၄၀၀ မီတာ ရှိတဲ့ စိမ့်မြေလွင်ပြင်ဖြစ်တယ်။ အရှေ့ အနောက် ၆၀ ကီလိုမီတာ တောင်မြောက...
မြင်ကွင်းတလျှောက်ကျယ်ပြန့် စွာရှိနေတဲ့ ခန့် ညားတဲ့ အက်စ်တောင်တန်းဖြစ်တယ်။ လှည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဖူဂျီတောင်ထိ လှမ်းမြင်နိုင်ပါတယ်။ တာက...
ရောရှိဂဒိုင်းရ က ခုစစွတ်ရှိရန်းအဲတောင်ရဲ့ ကျောဘက်မှာ ကျယ်ပြန့် တဲ့ စိမ့်မြေလွင်ပြင်ရှိတယ်။ တောရိုင်းသော ရှိရအဲတောင်နှင့် ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုင...
Hiroshima, Itsukushima Shrine, etc